A young girl gets an offer, her position asamidwife at Mathawri village, at the foothill of Mount Saramati, in eastern NAGA Land, North Western of Myanmar. She gets married toaMAKURY young man, and getsachild. All her kindness and care spreads over the village asamidwife, and devotes her life to her own family with sacrificed love and strong attachment.
Director - Sein Lyan
Cinematographer - Phyo Nge
Editor - Sai Naw Kham
Producer - Sein Lyan
- Mya Thandar Kyaw
"မေတ္တာ ရောင်စဉ်တန်းများ " မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ နာဂဒေသ စာရာမေတိ တောင်ခြေမှာ ရှိတဲ့ မကူရီလူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ မသော်ရီ ရွာကလေးကို ကံအားလျှော်စွာ ပြောင်းရွေ့တာဝန်ကျခဲ့တဲ့ အညာဒေသက သူနာပြု ဆရာမလေး။ မကူရီရွာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျ၊ သားတစ်ယောက် ရပြီး ဆေးအသိပညာချို့တဲ့ တဲ့ရွာသားတွေကို ဆေးကုပေးနေရင်း ဇနီးတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာ၊ သားဖြစ်သူကို ဖြစ်နိုင်ရင် သမ္မတကြီးတောင် ဖြစ်စေချင်တဲ့ မိခင်တယောက်ရဲ့ မေတ္တာ အပြင် ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ နာဂဒေသ ကို တိုးတက်စေချင်တဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေး အဖြစ် သူမရဲ့ မေတ္တာရောင်စဉ်တန်းများ။
Writer Sein Lyan Time 8:42 pm No comments: Links to this post
Labels: Documentary, Human Rights Festival, International, Women Rights, နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်